२३ जना बच्चाहरूलाई ब’न्धक बनाउनेलाई प्रहरीले मा’र्‍यो, श्रीमतिलाई स्थानीयवासीले यसरी मा’रे – PathivaraOnline
Home > अपराध > २३ जना बच्चाहरूलाई ब’न्धक बनाउनेलाई प्रहरीले मा’र्‍यो, श्रीमतिलाई स्थानीयवासीले यसरी मा’रे
admin February 1, 2020 अपराध, समाज	0
बीबीसी । सुभाष बाथमले २३ जना बच्चालाई ब’न्धक बनाएका थिए । आफ्नी एक वर्षीया छोरीको नक्कली जन्मदिन मनाउन भोज आयोजना गरेर २० बच्चालाई ब’न्धक बनाएका एक भारतीय पुरुषलाई प्रहरीले गो’ली हा’नेर मा’रिदिएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ह’त्याका आ’रोपित सुभाष बाथम धरौटीमा छुटेका थिए। उत्तर प्रदेशको फरुखाबाद जिल्लामा पछि स्थानीयवासीहरूले उनकी श्रीमतीलाई कु’टीकु’टी मा’रिदिएका थिए।
प्रहरीसँग उनको १० घण्टासम्म घ’म्साघ’म्सी चलेको थियो जुनबेला प्रहरी अधिकारीले उनीसँग सम्झौता गर्न खोजेका थिए। पछि उक्त भवनमा प्रहरी ज’बरज’स्ती पसेपछि उनी मु’ठभे’डमा मा’रिएका थिए। ब’न्धक बनाइएका छ देखि १५ वर्ष उमेरका सबै २३ बच्चाको सुरक्षित उद्धार गरिएको छ।
स्थानीय पत्रकार दीपक कुमार श्रीवास्तवले स्थानीयवासीले पुरै रात त्रा’समा बिताएको बीबीसीलाई बताए। “उनीहरूमा त्रा’स थियो र कोही पनि सुतेनन्। उनीहरू आफ्ना बच्चाको सुरक्षा निम्ति चिन्तित थिए।” उनले भने, “प्रहरीले घण्टौँसम्म उनलाई आ’त्मसम’र्पण गर्न मनाउन खोजेको थियो। जब त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन प्रह”रीहरूले विशेष फौ’ज म’गाएका थिए।” बाथमले आफ्नी छोरीको जन्मदिन भन्दै गाउँका बच्चाहरूलाई आफ्नो घर डाकेका थिए।
त्यसपछि उनले आफ्नी छोरी र श्रीमतीसहित सबैलाई उक्त भवनमा ब’न्धक बनाएका थिए। श्रीवास्तवले भने, “ह’त्या आ’रोपमा आफ्नो प’क्राउ पर्नुमा उनले स्थानीयवासी जिम्मेवार रहेको उनको विश्वास थियो र उनी त्यसकै ब’दला लिन चाहन्थे। ” ब’न्धक बनाएको ७ घण्टापछि बाथमले एक छ महिने बच्चालाई कौसीबाट एक छिमेकीलाई दिएका थिए। छिमेकीहरूले अधिकारीहरूलाई जानकारी दिएपछि त्यहाँ प्रहरी पुगेको थियो। प्रहरीमाथि उनले आफ्नो भवनबाट प्रहरीमाथि गो’ली च’लाएका थिए।
उत्तर प्रदेश प्रमुख ओमप्रकाश सिंहले भने, “उनीसँग गो’लीग’ट्ठा रहेको थाहा पाएपछि र ब’म प’ड्काउने भन्ने धम्की दिएपछि प्रहरीले उनीमाथि आ’क्रमण गर्ने निर्णय गर्‍यो।” “हामीले घरभित्र पस्ने प्रयत्न गर्‍यौँ, सुभाष मु’ठभे’डमा मा’रिए।” गो’ली हा’नाहा’नमा उनकी श्रीमती, दुईजना प्रहरी र एकजना बाहिरी व्यक्ति घाइते भएका थिए। इन्डिया टुडेका अनुसार बाथमले यसअघि स्थानीय सरकारी कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उनको घरमा शौ’चालयको सुविधा नभएको र उनलाई सरकारी आवास मनाही गरिएको बताएका थिए।
उनले आफू श्रमिक भएको र उनकी बिरामी आमाले खुला ठाउँमा शौ’च गर्नुपरेको बताएका थिए। घन्टौँ लामो ब’न्धक का’ण्डमा केही टेलिभिजन च्यानलहरूले बाथमलाई सम्पर्क गरेर यदि उनको माग सरकार या अधिकारीहरूसँग पुर्‍याउन मन भए आफूहरूसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका थिए।
टिपर रंगशाला प्रवेश गर्दा आधिवेहेरी नै ल्यायो भन्दै भावुक भए धुर्मुसले! यसरी व्यक्त गरे आभार (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमतिले श्रीमानलाई बनाईन् घरको न घाटको! ९० लाख बढि पैसा लगेपछि सडकमा पुगेका तेजबहादुरको फिल्म जस्तै लाग्ने कहानी ! (भिडियो हेर्नुस्)
साझा बसकि महिला ड्राइभरको हृदयविदारक कथा : आँशु झार्दै सुनाइन् जिन्दगीका कहाली लाग्दो क्षणहरु – भिडियो सहित